China kugadzirwa kwemaitiro esimbi oxide tsvuku vagadziri uye vanotengesa | Shencai Rangi
kugadzirwa kwemaitiro esimbi oxide tsvuku
Kune maviri makuru maitiro ekugadzira esimbi oxide tsvuku: yakaoma uye yakanyorova. Nhasi tichatarisa maitiro maviri aya.
1. Pane pakaoma maitiro
Yakaoma maitiro ndeye echinyakare uye epakutanga simbi oxide tsvuku yekugadzira maitiro muChina. Zvakanakira ayo ari nyore kugadzira maitiro, mapfupi maitiro kuyerera uye mashoma mashandisiro emidziyo. Izvo zvinokanganisa ndezvekuti chigadzirwa chigadzirwa chakashomeka zvishoma, uye gasi rinokuvadza rinogadzirwa panguva yekutora, iyo ine maitiro akajeka pane zvakatipoteredza. Senge nzira yejacosite yekuverenga, huwandu hukuru hwemhepo ine sarufa inogadzirwa panguva yekugadzirisa.
Mumakore achangopfuura, zvichibva pakushandiswa kwakazara kwesimbi ine marara, yakaoma nzira tekinoroji senge sulphuric acid cinder nzira uye iron ore upfu acidification yekugocha nzira yakabuda munyika medu. Zvakanakira maitiro aya zviri nyore kuita uye kushomeka kushoma, uye zvinokanganisika ndezvekuti chigadzirwa chemhando yepamusoro chakadzikira, icho chinogona kungoshandiswa munzvimbo dzakaderera, uye huwandu hukuru hwemagasi anokuvadza anogadzirwa mukugadzirwa kwacho, uko ine simba rakakura pane zvakatipoteredza.
Iyo yekunyorova maitiro ndeye kushandisa ferrous sulphate kana ferrous nitrate, ferric sulphate, ferric nitrate kunge mbishi zvigadzirwa, uchishandisa yekutanga kugadzirira kwekristaro mbeu, kozo oxidation kugadzirira simbi tsvuku simbi oxide tsvuku yekugadzira nzira. Izvo zvakasvibirira zvinoshandiswa zvinogona kunge zviri ferrous sulphate kana ferrous nitrate yakasimba mbishi zvigadzirwa, kana aqueous mhinduro ine ferrous sulphate, ferrous nitrate, ferric sulphate uye ferric nitrate. Iyo neutralizer inoshandiswa inogona kunge iri simbi sheet, chinyorwa simbi, alkali kana ammonia.
Kubatsira kwenzira nyoro kuri mune rakanakisa mhando uye mashandiro ezvigadzirwa. Mhando dzakasiyana dzeakateedzana iron oxide pigments inogona kugadzirirwa. Izvo zvinokanganisa zviri munzira refu, simba rakakura mukugadzirwa, uye huwandu hwakawanda hwemarara gasi uye acid mvura yemvura inogadzirwa. Parizvino, pane kushomeka kweinoshanda nzira yakakwana yekushandisa, iyo ine simba rakakura pane zvakatipoteredza.
Kupfupisa, kune akawanda marudzi esimbi oxide tsvuku yekugadzira maitiro, izvi zvigadzirwa zvekugadzira zvine zvazvakanakira zvinoramba zvichikurudzira kukura kwesimbi oxide pigment indasitiri, kuunza nyore kugadzirwa kwevanhu.
Post nguva: Jul-29-2020